दृढ संकल्प ले मात्र छुटनसक्छ धुम्रपानको लत » Nepal Europe News
Home > छापामा > दृढ संकल्प ले मात्र छुटनसक्छ धुम्रपानको लत
NepalEurop October 18, 2016 October 18, 2016 छापामा, विचार/विश्लेषण, स्वास्थ्य	0
डा ललित कुमार मिश्र
कार्तिक १, २०७३- प्राय; गरेर बानी व्यवहार जस्ता कुराहरु मानिस सुरु-सुरुमा कसैको देखासिकी गरेर या साथिभाईको लहै-लहैमा लागेर वा सौखको रुपमा यसलाई लिइने गर्दछन्। पछि गएर मानिसको यही सौख बानी(ह्यबिट) को रुपमा परिणत भइ व्यक्तिको व्यवहारमा पनि देखिन्छ। फेरी जीवन भरी धुमपानको लतले व्यक्तिको पिछा छोडदैन ।
एकप्रकारले बानीले मानिसलाई आफ्नो ( गुलाम) बनाउँछ र मानिस स्वतः दास हुन पुग्छ। मानिसका सौखहरु पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । त्यसमध्ये एउटा सौख यस्तो पनि छ जसले आजकलका युवा पिढीलाई आफ्नो गिरफ्तमा लिइरहेकोछ। त्यो बानि केहो? त्यो हो सुर्तीजन्यपदार्थ को सेवन, जुन गुटखा, पानपराग, खैनी, बिडी, चुरोट, हुक्का आदीको रुपमा नशाको लागि प्रयोग गरिन्छ। अक्सर तनाव या मानसिक दबाब कम गर्नको लागि मानिस नशाको सेवन-सुरुमा सौखको रुपमा गर्दछन्।
पछि यही सौख उसको कमजोरी वा मजबुरी हुनजान्छ र व्यक्तिलाई नभई न हुने हुन्छ । यस्ता व्यक्तिमा इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास, कुनै कुराको निर्णय लिने क्षमतामा कमी, व्यवहारमा परिवर्तन हुनुका साथै दिर्घकालीन प्रयोग गरेको अवस्थामा मुख, घाँटी, पेट र छातिको क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगको खतरा बढन जान्छ । तम्बाकु (सुर्ती) को सुकेको पातमा निकोटिन, पायटिडिन, पिकोलिन तथा कालिडिन नामक तत्वहरु पाइन्छ ।
यि सबै हानिकारक तत्वहरु सुर्तीजन्य पदार्थबाट बनेका विभिन्न किसिमका ऊत्पादन (ब्रान्ड) हरुको सेवनको दौरान फोक्सोमा हानिकारक प्रभाव पार्दछ । तम्बाकुको धुवाँमा उपरोक्त हानिकारक तत्वको आलावा वेंजिन तथा रेडियो एक्टिवलिड पनि विद्यामान रहन्छ जसको अधिक मात्राले ल्युकिमिया ( ब्लड क्यान्सर) को कारक बन्नसक्छ ।
महिला पनि पुरुषभन्दा के कम छन् र देखासिकी भनौ या सोखको रुपमा-महिलाहरुमा पनि धुम्रपान गर्ने बानी बढिरहेकोछ । जसले गर्दा यिनिहरुको जन्मिने बच्चा प्राय: बिरामी भइरहने र आकस्मिक मृत्यु हुने खतरा भइरहन्छ । यस्ता महिलाहरुले आफ्नो जन्मिने सन्तानलाई- क्यान्सरको तत्व बच्चा जन्मिनुको साथै उपहार स्वरुप दिन्छन् ।
लन्डनका डा.क्लिवबेटसले आफ्नो वर्षौदेखिको अन्सुन्धानमा के पाए भने, ‘धुम्रपानको सेवनले पुरुषमा लिंगोत्थानको क्षमतामा कमी ल्याउनुका साथै रक्तबाहिनी नलीलाई समेत क्षति पुर्‍याउँछ र मुटुको गतिलाई पनि प्रभावित गर्दछ ।
सुर्तीको सेवनले व्यक्तिमा घबराहट, बैचैनी, अनिन्द्रा, तनाव, सुस्ती, आलस्य, थकावट, अवसाद, स्नायुशुल, मुटुकोको धडकन बढनु, उच्चरक्तचाप, भोक न लाग्नु , कब्जियत, मुख गन्हाउनु, पाचन सम्बन्धि रोग हुनु, आखाँको दृष्टी कमजोर हुनु, असमय मै बुढोजस्तो देखिनु, वल्वको प्रकाश या मैनबत्तिको उज्यालोमा घबराहटहुनु को साथै मुटुको रोगहुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
जसलाई टोबाको हर्टडिजिज (सुर्तीजन्यह्रदय रोग) पनि भनिन्छ । धुम्रपान गर्ने व्यक्तिको घाँटी दुख्नुको साथै बिहान सबैरे सुख्खा खोकी लाग्नुका साथै केही दानादार कफ( खकार) आउन सक्छ । धुम्रपानको सेवनले ब्रोकंकाइटिस, दम तथा पुरुषमा नपुंसकता तथा महिलामा बाँझोपन पनि हुनसक्छ ।
यसैप्रकार गुटखा, पानपराग, पानमसालको सेवन गर्नेहरुमा मुख भित्र रहेका तन्तुहरु खुम्चिएर (फाईब्रोसिसि) को कारणले व्यक्ति राम्रोसँग मुख खोल्न(आँऽऽगर्न) सक्दैन । आँऽ गर्दा मुख कम खुल्छ र सम्वेदनशीलता बढन जान्छ। गुटखा सेवन गर्ने व्यक्तिहरु मसालायुक्त खानेकुरा या गरम पेयपदार्थ खान या पिउन सक्दैनन्। खाएमा मुखमा भित्र तकलिफ हुन्छ। धेरैजसो गुटखाको प्रयोग गर्नेहरुलाई मुखको वा घाँटीको क्यान्सर हुनाले मृत्यु समेत हुनसक्छ।
यही कारणले होला कि विश्वका धैरेजसोमुलुकहरुमा त्यहाँका सरकारले, स्थानीय प्रशासनले सार्वजनिकस्थल, स्कुल, कलेज, थिएटर, सिनेमा हल, अस्पताल, बस, रेलगाडी, ट्रामगाडी, एयरपोर्ट, बसपार्क, गिर्जाघर, आदि ठाउँहरुमा धुमपान निषेध छ भनेर सूचना टाँस्नुको साथै चुरोटको बट्टा, खैनीको पुडिया, गुटखाको पाउचमा समेत मानिसलाई मुख, जिब्रो र गालामा क्यानसर भएको चित्र अंकित गरिएको छ ।
ताकी सुर्तीको सेवन गर्नेहरुलाई चेतना होस र धुमपान गर्ने बानी बेलैमा छोड्ने प्रयास गरुन्।
कसरी हुन्छन् चेन स्मोकरः- जब कुनै व्यक्ति सिगरेट/बिडी/सुर्तीको सेवन गर्दछ भने सेवनकर्ताको मस्तिष्क (ब्रेनमा) लगभग १० सेकेन्ड त्यसपछि सेन्ट्रल नर्वस सिस्टममा ५ मिनटसम्म सुर्तीको असर रहन्छ ।
धुम्रपान गर्नाले केहीबेरको लागि भएपनि मानिसमा काम गर्ने क्षमता बढेको महसुश हुन्छ । र व्यक्ति निकोटिनको सुरमा आफ्नो काम केहीबेर भएपनि मजाले गर्छ । तर यो जाँगर धेरै समयसम्म चल्दैन । केही समय पश्चात शिथिलता आउन सुरुहुन्छ, काममा मन लाग्दैन , छटपटी लाग्छ, पछि गएर शरीर सुस्त हुनथाल्छ बिस्तारै-२ कामगर्ने क्षमतामा पनि कमि आउन थाल्छ र फेरी व्यक्तिलाई धुमपानको आवश्यकता महसुश हुन थाल्छ । यसरी बारम्बार चुरोटको तल-तल मेटने प्रयासमा व्यक्ति धुम्रपानकोअम्मलि अर्थात(चेनस्मोकर)हुनजान्छ।
उपचार: होमियोप्याथिक चिकित्सामा पनि धुम्रपान या सुर्ती सेवनको बानीबाट सजिलै छुटकारापाउन साकिन्छ। तर यसको लागि व्यक्तिकोआफ्नो इच्छाशक्ति (विलपावर) दृढ हुनुपर्दछ। मात्र औषधिको सेवनले केही पनि हुदैन ।औषधिले त धुमपानको लत छुटाउनमा व्यक्तिलाई सहयोग गर्नै मात्र हो । व्यक्तिले पनि आफ्नो सहयोग आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
होमियोप्याथिकऔषधि सेवन गर्नुका साथै नियमित रुपमा योगाभ्यास- कापालभाति, प्रणायाम, मेडिटेसन( ध्यान) को सहयोग पनि लिन सकिन्छ । यसबाट पनि धुम्रपानको लत छुटाउनमा केही हदसम्म मद्दत मिल्दछ । होमियोप्याथिकमा चिकित्सामा धुमपानको लत छुटाउन प्रयोग हुने प्रभावशाली औषधिहरु छन् । यस चिकित्सामा रोगको उपचार गर्दा रोगीको मानसिक एवं शारीरिक लक्षणहरुलाई मध्यनजर राखेर उचित औषधिको चयन गरिन्छ। रोगीको लक्षणको आधारमा सफलतापूर्वक प्रयोग हुने औषधिहरु निम्न लिखित छन् ।
१) प्लेटेगोंमेजर-२००/शक्ति – यसको प्रयोगले निकोटिनको कारणले हुने अनिन्द्रा र सुस्तीबाट राहत दिन्छ।
२) डेफ्ने इडिकां- २००/ शक्तिको- सुर्ती तथा यसबाट उत्पादन भएका चिजहरु जस्तै-खैनि,बिडी, सिगरेट, आदिको चाहनाप्रति अरुची उत्पन्न गराउँछ ।
३) केलेडियम-२००/शक्ति- सुर्तीको तल-तललाई यसले हटाउनमा मद्दत गर्छ ।
४) टेबेकम-२००/शक्ति- यसऔषधिको सेवनले व्यक्तिलाई यस्तो अवस्थामा ल्याइदिन्छ कि सुर्तीको सेवन गर्ने इच्छा हुने बित्तिकै बाक्क-बाकि हुन थाल्छ, र व्यक्तिमा धुमपान प्रति अरुची हुनजान्छ ।
५) इपिकाक-२००/शक्ति- चुरोटको गन्धले बाक-बाकिआउनु, बान्ताहुनु आदि अवस्थामा यसको प्रयोग गरिन्छ।
६) आर्सेनिकएल्वम- २००/शक्ति- सुर्ती ( खैनि )को सेवनबाट हुने शारीरिक समस्या( दुष्प्रभाव) मा यसऔषधिको प्रयोगले राहत पुर्‍याउँछ ।
७) नक्सवोमिका-२००/शक्ति- धुमपान गर्ने व्यक्तिहरुमा सुर्तीको सेवन पश्चातहुने (पाचन सम्बन्धि) ग्यास्ट्रिकको अवस्थामा यसको सेवनले राहत पुर्‍याउँछ ।
८) फासफोरस;-२००/शक्ति-धुमपानको सेवन गर्नेहरुमा देखिने शारीरिक समस्याहरु जस्तै- यौवन शक्ति कमजोर हुनु, मुटुको धडकन बढनु, आदिमा यसको प्रयोले फाइदा पुर्‍याउँछ ।
यसैप्रकार रोगीको अवस्था उअनुसार अरु औषधिहरु जस्तै- केम्फर, इग्नेसिया, स्टेफसिग्रिया, स्पाइजेलिया आदिको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उपरोक्त होमियोप्याथिक औषधिहरु आफ्नो नजिकका स्थानीय चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नियमित रुपमा सेवन गर्नु पर्नेहुन्छ।
लोकमान कार्की एक सातादेखि दुबईमा रहेको खुलासा !
कोइरालालाई चार हस्तीले गरे बाईबाई
नेपालमा १० बजे देखि ५ बजे सम्म ओ पी डी खुल्ला हुने !